YEYINTNGE(CANADA): Friday, February 06
သူ့ကိုလာကြိုတဲ့ သူ့အမျိုး တွေကယူနန်တရုတ်တွေပါ။ယူနန်လိုပြောတာကြတော့မွတ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/06/20092အကြံပြုခြင်း
ကိုးကန့်လူမျိုးသည် မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မည်သည့်အခါမှ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ရှမ်းလူမျိုး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ကိုးကန့်ဟာ ရာခိုင်နှုံးပြည့် တရုပ်လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နယ်စပ်တနံတလျားမှာ နှစ်နိုင်ငံကိုခွပြီး နေထိုင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရှိနေပါတယ်။ မြို၊ ခမီး၊ လူချိုင်း၊ မရမာကြီး၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ နာဂ၊ မီဇို၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ၀၊ ပအို့၊ ပလောင်၊ လီဆူး၊ ပဒေါင်၊ ကရင်၊ မွန်၊ စသဖြင့် တိုင်းရင်းသားအသီးသီးသည် မြန်မာနိုင်ငံဖက်မှာ နေထိုင်ကြသူများရှိသလို တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဘ၈င်္လားဒက်ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ တရုပ်၊ လာအို၊ ယိုးဒယားနိုင်ငံတို့မှာ နေထိုင်ကြသူများလည်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေကို မိမိအခြေချနေထိုင်သောနိုင်ငံတွေမှာ အပြည့်အ၀ ရရှိနေပါတယ်။ ရလဲရသင့်ပါတယ်။ ရပိုင်ခွင့်လဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေလိုဘဲ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်တွေမှာ နှစ်တွေရာထောင်ချီပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပသျှူးလူမျိုးများရှိနေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ ပသျှူးတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဖက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ပသျှူးတွေကိုတော့၊ မူလတိုင်းရင်းသား(၁၄၃)မျိုးမှာ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားခဲ့ပေမဲ့ မဆလခေတ်ကစပြီး ယနေ့တိုင် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က တိုင်းရင်းသားအဖြစ်က ပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ ကမန်လူမျိုးတွေဟာ သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရ ဘယ်လိုမှငြင်းမရတဲ့ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေပါ။ ကမန်လူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှအပ အခြားဘယ်နိုင်ငံမှာမှ နေထိုင်သူများလည်း မဟုတ်ကြပါဘူး။ မဆလခေတ်အထိ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသတ်မှတ်ခံထားရပေမဲ့ အခု န၀တ၊ နအဖလက်ထက်ကျမှ ဒီလောက်သမိုင်းစဉ်လာအရ အထင်ကရ တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကမန်လူမျိုးတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုတော့ပါဘူး။ သူတို့ကို မှတ်ပုံတင် မထုတ်ပေးတော့ဘူး။ ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ထားတယ်။ သေမလို့ဖြစ်နေရင်တောင် ရန်ကုန်ကို ဆေးသွားကုဖို့ ခရီးသွားလက်မှတ်ကအစ အင်မတန်ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ကိုးကန့်လူမျိုးသည် မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မည်သည့်အခါမှ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ရှမ်းလူမျိုး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ကိုးကန့်ဟာ ရာခိုင်နှုံးပြည့် တရုပ်လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ န၀တ၊ နအဖတို့က ကိုးကန့်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်တော့၊ မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပျောက်၊ လူမျိုမှ လူမျိုးပျောက်မယ်ဆိုတတ်သော၊ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်တတ်သူများက ကန့်ကွက်ဖို့ နေနေသာ အီးတောင် ကျယ်ကျယ်ပေါက်လိုက်သံ မကြားလိုက်ရပါဘူး။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ကမန်နဲ့ ပသျှူးလူမျိုးတွေမှာ တူညီမှုတစ်ခု ရှိနေတာကိုတော့ ပြောဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုးကန့်တို့သည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်ကို လက်မခံနိုင်သေးသူများ ရှိနေပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာမှလွဲ၍ အခြားဘာသာများကို လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်လို့ ပြဌာန်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်တို့သည် အမေရိကန်သမတ အိုဘားမားပြောသလို ၂၁ရာစုအတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးသူများလား။
ဒီနေရာမှာ စကားညှပ်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပြောကြားလိုတာက ကျနော်သည် ကိုးကန့်ဆန့်ကျင်ရေး၊ တရုပ်မုန်းတီးရေးသမား မဟုတ်သလို တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် မြန်မာတရုပ်များကို ချစ်ခင်လေးစားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်များသည် မြန်မာတရုပ်များကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားသွေးပါသူများဖြစ်ပြီး တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်များ၊ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့် ကာကွယ်တတ်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကလွဲလို့ တရုပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘင်္ဂါလီဘဲဖြစ်ဖြစ် လွှမ်းမိုးလာမှာကို မြန်မာမွတ်စလင်ကော၊ မြန်မာတရုပ်ကော လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို စမပြောခင် စာဖတ်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ရိုဟင်ဂျာကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဖာသာမေးပြီး ကိုယ့်ဖာသာ အရင်စမ်းပြီးဖြေကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် မြင်ပါသလား။ နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံပါသလား။ လူအဖြစ်ကော အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ခွေးလောက်၊ ကြောင်လောက်ဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးထားပေးနိုင်ပါသလား။
မေးခွန်းက သိပ်ရင့်သီးတယ်၊ လက်တွေ့မကျဘူး၊ ဘယ်သူက လူကို ခွေးလို့ထင်ကြမှလဲဆိုပြီး အပစ်တင်လိုသူများရှိလျင် ရှင်းပြပါရစေ။ ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခွေးလောက်မှ တန်ဖိုးမထားနိုင်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘယ်ခွေးကိုမှ မလုပ်တဲ့ လှေပျက်ထဲထဲ့ပြီး ပင်လယ်ထဲမျှောချနေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါက ထိုင်းဘဲ။ ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာ ဒါလောက်တော့ မဆိုးသေးပါဘူးဆိုလာရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဟစ်တလာက ဂျူးလူမျိုး ၆သန်းကျော်ကို ကလေးကော၊ အမေအိုပါမကျန် သတ်တုံးက သူတို့အာရိယန်မျိုးဆက်တွေနဲ့ သွေးမရောရအောင်၊ အစဉ်သန့်ရှင်းနေအောင် လူသားမျိုးညံ့ဂျူးတွေအဖြစ် ကိစ္စတုံးရှင်းပစ်ခဲ့တာပါ။ ခွေးဆိုး၊ ခွေးရူးတွေအဖြစ်သဘောထားပြီး သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခွေးဆိုး၊ ခွေးရူးတွေထက်ပိုဆိုးတဲ့ ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးလိုသဘောထားတဲ့ ပညာရှင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များ ရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့ရေးပြီး လူသိရှင်ကြားကြေညာထုတ်ဝေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး Influx Virus ဆိုတဲ့စာအုပ်အမည်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရွံရှာမုန်းတီးစရာကောင်းတဲ့၊ အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ ဗိုင်းရပ်ပိုးတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်ပိုးတွေကို မပြန့်ပွါးခင် အချိန်မီ အလျင်အမြန် ဖျက်ဆီးပစ်ရသလို ရိုဟင်ဂျာတွေကို မျိုးတုန်း ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လှုံ့ဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အတွေးအမြင်ပါ။ ဟစ်တလာထက် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေကို မာဂဓဆိုတဲ့စကားက ဆင်းသက်လာတဲ့ မောက်လူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အာရကန်လူမျိုးလို့လဲ သမိုင်းမှာ အထင်အရှားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးကို ချစ်ခြင်း၊ အမျိုးဂုဏ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ရခိုင်(ရက္ခိုင်)လူမျိုးလို့ခေါ်မှ နှစ်သက်ကြတာမို့ မောက်၊ အာရကန်လို့မခေါ်တော့ဘဲ အားလုံးက ရခိုင်လူမျိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ပြသနာမရှိပါဘူး။
တောင်သူက ပအို့၊ တလိုင်းက မွန်၊ ဂျိန်းဖေါက ကချင်၊ ဆီရမ်(Siam)က ထိုင်း(Thai)၊ ဆီလုံ(Ceylon)က သီရိလင်္ကာ(Srilanka)၊ အက်စကီမိုး(Eskimo)က အိနွတ်(Inuit)လူမျိုး စသဖြင့် မိမိအမျိုးအမည်၊ မိမိနိုင်ငံအမည်ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းကြတဲ့အခါ အခြားဘယ်လူမျိုး၊ အခြားဘယ်နိုင်ငံကမှ ငါသဘောမတူရင် ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ မကန့်ကွက်နိုင်ပါဘူး။ ကန့်ကွက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ သဘောထားကြီးစွာ၊ နားလည်မှုထားကာ ကာယကံရှင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်း သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ပေးရတာပါဘဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလား၊ နိုင်ငံသားလား၊ နိုင်ငံခြားသားလားဆိုတာကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး သူတို့က သူတို့ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်စေချင်တာကို မခေါ်နိုင်ပါဘူးလို့ ငြင်းသင့်ပါသလား။ ငြင်းခွင့်ကော ရှိပါသလား။ သူတို့ကို သမိုင်းမှာ စစ်တကောင်းသားလို့ ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဘင်္ဂါလီကုလားလို့ ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ခေါ်တောလို့ ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဒီနာမည်တွေကို မကြိုက်လို့၊ ဒီနာမည်တွေဟာ နှိမ့်ချခေါ်ဝေါ်တာမို့ မခေါ်ပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုတာကို မရဘူး၊ မင်းတို့ နာတာ၊ မကြိုက်တာ ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါခေါ်ချင်တာ ငါခေါ်မယ်လို့ တစ်ဖက်သားကို နှိမ့်ချပြီး ဆိုသင့် ဆိုထိုက်ပါသလား။
အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကို သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာ အမဲကောင်(Nigger) လို့ဘဲခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမဲကောင်(Nigger)လို့ဘဲ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာ အထင်အရှား မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခဲ့တာမို့ အမဲကောင်(Nigger)လို့ဘဲ ခေါ်နိုင်မယ်လို့ ခုနေခါမှာ ပြောရဲသူများရှိပါသလား။ သူများတွေရဲ့ နှလုံးသားကို နာကြင်စေတဲ့ စကားလုံးမျိုး၊ အပြုအမူမျိုးကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် စာနာတတ်ခြင်း၊ လူသားဆန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမများမှာ ပါရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေက သူတို့ဟာ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနိုင်ငံက ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ဆင်တူကြသော်လည်း၊ ဘင်္ဂါလီများ မဟုတ်ကြဘဲ မြန်မာပြည်မှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ မူလက သတ်မှတ်ထားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၄၃ မျိုးထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးက တရားဝင်ပါရှိထားပြီးဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေထဲမှာလည်း၊ တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုပြီး ရေးသားပြဌာန်းထားတာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေက လွတ်လပ်စွာ မဲပေးပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်တွေ လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သလို၊ ဗဟိုအစိုးရထဲမှာ ကျန်းမာရေးဌာန ပါလီမန်အတွင်းဝန်အဆင့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့တာရှိခဲ့တယ်။ မြန်မာ့အသံက တိုင်းရင်းသားအသံတွေကို လွှင့်တဲ့အခါ ရိုဟင်ဂျာအစီအစဉ်ဆိုပြီး ၁၉၆၁ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၅ခုနှစ်အထိ ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားနဲ့ အသံလွှင့်ပေးခဲ့တယ်။ စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလက်ထက်မှာမှ အသံလွှင့်အစီအစဉ်သာမက တိုင်းရင်းသားအဖြစ်ကပါ ပယ်ဖျက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ အထောက်အထားများနှင့်ပြဆိုပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ တစ်ဖက်က အပြန်အလှန် တင်ပြတာက ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ဖဆပလတွေ မဲရအောင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လဒ်ထိုးတဲ့အနေနှင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက မကြာသေးခင်ကာလကမှ အလုံးအရင်းနဲ့ စီးပွါးရေးအရ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီများသာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုလက်ခံလိုက်ရင် သူတို့နောက်က ဘင်္ဂါလီတွေဆက်ဝင်လာပြီး ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံးတင်သာမက မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာ ဘင်္ဂါလီတွေ လွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ် ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို လူဦးရေပေါက်ကွဲမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ အိမ်နီးချင်း လူမျိုးကြီးနှစ်မျိုးက ၀ါးမြို ဖုံးလွှမ်းသွားမှာကို မဖြစ်မနေ တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတာမို့ အင်မတန်သဘာဝကျပြီး စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ ထောက်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတာဝန်ကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့က နယ်စပ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ကိုးကန့်တို့ထံမှ ပြည့်ဝပြတ်သားသော စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Uncompromised Commitment to cooperate)ကို မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရများဖက်ကလည်း နယ်စပ်ဒေသအားလုံးမှာ တိကျသော သန်းကောင်စာရင်း(Census)များကို ကောက်ယူ ထိမ်းချုပ်နိုင်သော အနေအထားတရပ်ကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုက ရိုဟင်ဂျာတွေမှာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်းတွေရှိခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ကို ခွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့၊ မွတ်စလင်နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ပြချက်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတာမို့ အင်မတန်အရေးတဲ့ ထောက်ပြချက်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီတရားမျှတတဲ့ စိုးရိမ်ချက်(Legitimate Concern)ကို ရိုဟင်ဂျာတွေဖက်က အဖြေပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေ၊ ဒီလိုအစွန်းရောက် အယူအဆတွေ ရှင်သန်လှုပ်ယှားနေတုန်းဘဲလား။ ရှိနေလျင် ဘယ်လို ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်မလဲ။ မရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်တောင် နောင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သလား။ မပေါ်ပေါက်လာအောင် ဘယ်လို ပူးပေါင်းကာကွယ်သွားမလဲဆိုတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မိမိတစ်သက်မှာ လုံးဝမကြားဖူးပါဘူး၊ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူးလို့ စကားကုန်ဆိုလာသူများကတော့ မိမိညံ့တာ၊ ဗဟုသုတနည်းတာ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို နားမလည်တာကို လူမသိ သိအောင် လူလည်ခေါင်မှာ မရှက်မကြောက်နဲ့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းပြနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ မဟာပညာကျော်အချို့ကလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာစကားမပြောတတ်တာကြောင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့နေနေသာ မြန်မာပြည်မှာတောင် နေထိုင်ကြသူများ မဟုတ်ဘူးလို့ မျက်စေ့စုံမှိတ် ငြင်းတတ်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာစကားကို လူတိုင်းမပြောတတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ကရင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ နာဂ၊ မွန်၊ ကချင်၊ ကယား၊ ပလောင်၊ လီဆူး၊ ၀၊ လူချိုင်း စတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအများအပြား စေ့စေ့ပေါက်ပေါက်ဆိုရင် အမျိုးတစ်ရာကျော်လောက်တောင် ရှိနေနိုင်တာကို သိဟန်မတူကြပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ကျနော့မှာ မရှိပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသင့်၊ မပြုသင့်ဆိုတာကိုလည်း မဆွေးနွေးလိုပါဘူး။ ဆွေးနွေးသင့်သော အချိန်ကာလ ရောက်ပြီလို့လည်း မထင်သေးပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို နောင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ခေတ်ရောက်သောအခါ၊ ဒေါက်တာ ဦးအေးချမ်း၊ ဒေါက်တာ ဦးအေးကျော်တို့လို ရခိုင်ပညာရှင်တွေ၊ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ရိုဟင်ဂျာ ပညာရှင်တွေ၊ ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အခြားလိုအပ်သော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးနှင့် အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းဆိုရာမှာသာ အငြင်းပွါးမှုရှိနေသော်လည်း ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ခံစားပိုင်ခွင့်ကိုတော့ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖများကလွဲရင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံညွန့်ပေါင်းအစိုးရကစပြီး၊ ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်များအလယ်၊ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးတင်သာမက ရခိုင်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးအေးသာအောင် အတွင်းရေးမှူးလုပ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဖွဲ့(CRPP)ကတောင် လက်ခံထားပါတယ်။ (CRPP)ကလက်ခံတယ်ဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)က လက်ခံတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဆိုတာ လူမျိုးတိုင်း၊ ဘာသာတိုင်းမှာ ရှိတတ်တာမို့ အခုလိုဆိုလိုက်တာကို လက်မခံနိုင်သူများရှိလျင် ၄င်းတို့ကို မေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ကျနော့ကို ကန့်ကွက်စကားမဆိုခင် မိမိသက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၊ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်များကို အလျင်မေးမြန်းအတည်ပြုပြီးပါမှ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကန့်ကွက်စကားဆိုစေချင်ပါတယ်။ ၀ါးလုံး ချေးသုတ်ရမ်းတာမျိုးကိုတော့ ကျနော်တုန့်ပြန်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ လူတွေမျက်စေ့သျှမ်းနေတတ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ထပ်ထောက်ပြဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တစ်ဖက်နိုင်ငံက တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသူတွေဆိုပြီး စစ်ဆင်ရေးအမျိုးမျိုးလုပ်လာတဲ့အပေါ်မှာ ဒီရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီတွေက တစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတာမို့ အစစ်အဆေးမခံနိုင်ဘဲ တစ်ဖက်က သူတို့နိုင်ငံထဲကို ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဖြင့်ရင် ဘင်္ဂါလီတွေသာဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို စစ်ဆင်ရေး အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီးတိုင်း ဘာလို့အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လက်ခံနေရတာလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပြန်လက်ခံစရာမလိုပါဘူး။ ပြန်လက်ခံရတယ်ဆိုကတည်းက ထွက်ပြေးသွားတဲ့ တစ်ဖက်နိုင်ငံသားဆိုသူတွေဟာ တစ်ကယ်တော့ နဂိုကတည်းက ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဖြစ်နေလို့ဘဲပေါ့။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ သို့သော် ဒီနေရာမှာ တဖက်နိုင်ငံသားတွေက တရားမ၀င် ခိုးဝင်နေထိုင်နေတာတွေလဲ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင် တရားဥပဒေနှင့်အညီ စိစစ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီအခါမှာ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ပြန်လက်ခံရမှာကို သိနေလျက်နဲ့ ဘာလို့ မောင်းထုတ်တာတွေကို အကြိမ်ကြိမ်လုပ်နေရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေနှစ်ချက်ကို စဉ်းစားမိပါတယ်။
တစ်ခုကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တတိုင်းပြည်လုံး ရန်ကုန်ကအစ နယ်စပ်တွေအဆုံး မတည်မငြိမ်မှုတွေကို ဖန်တီးထားနိုင်မှ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာမျိုးက သက်ဆိုးရှည်တတ်တာမျိုးဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမိတာက၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေထဲက လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓါတ်အပြင်းထန်ဆုံး လူမျိုးစုတွေထဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသားက ထိပ်ဆုံးက အုပ်စုထဲမှာ ပါတယ်လို့ ကျနော်လေ့လာမိသလောက်အရ ထင်မိပါတယ်။ (လူမျိုးစုတွေ လွတ်လပ်ရေးလိုချင်တာ၊ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်အုပ်ချုပ်ချင်တာ အပစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝပါ။ ဒါကြောင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကို ဖွဲ့လိုလျင်၊ တစ်ကယ်ဘဲ တိုင်းပြည်အေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးလိုလျင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းနိုင်ခွင့်ကို မဖြစ်မနေ အခြေခံရမှာဖြစ်ပါတယ်)။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုက ပြည်မကနေပြီး ဆက်သွယ်ရ အခက်ခဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခြင်းအပြင် မိမိဖါသာရပ်တည်မယ်ဆိုရင် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ ပထ၀ီအနေအထားရှိနေခြင်းတို့ကလည်း အထောက်အကူပြုသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ မဆလအပါအ၀င် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ဒီရခိုင်အမျိုးသားတွေကို ထိမ်းချုပ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းစုံကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ဖို့၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေ အားနဲစေဖို့ ဒုတိယ လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပဋိပက္ခ(Constant in-fighting)ကို အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင် ဖန်တီးခြင်းကလည်း နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် သုံစွဲခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်ခေတ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ် အကူးအပြောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အချို့ အမြင်မကျယ်မှုတွေကြောင့် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် လူမှုပဋိပက္ခတွေကို ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်သွားအောင် တွန်းပို့လေခဲ့သလားလို့ ဆင်ခြင်မိပါတယ်။
နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တန်းတူညီမျှဖြစ်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်ကြီး (၃)ရပ်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဒီအခြေခံအချက်ကြီး (၃)ရပ်ကို လက်မခံနိုင်သူများကတော့ ကျနော့ဆွေးနွေးချက်တွေကို လက်ခံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံသေးသရွေ့ လူမျိုးစုလွှတ်တော်လို လွှတ်တော်မျိုးမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေက လူမျိုးစုကို ကိုယ်စားပြုပြီး တက်ရောက်ခွင့် မရှိနိုင်ပါဘူး။ သို့သော် လူဦးရေကို အခြေခံတတ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်းမှာတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေက လွှတ်တော်အမတ်တွေအဖြစ် ပါဝင်ပြီး တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးစုလွှတ်တော်ဆိုတာ လူဦးရေပေါ်မှာ မူမတည်ဘဲ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ သန်းသုံးဆယ်ကျော်နိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးက လူမျိုးစုလွှတ်တော်မှာ နှစ်ယောက်တက်ခွင့်ရှိလျင် သိန်းဂဏန်းလောက်ရှိတဲ့ လူမျိုးငယ်တစ်ခုကလည်း နှစ်ယောက်တက်ခွင့်ရတတ်တဲ့ လွှတ်တော်မျိုးပါ။ လူမျိုးစုတွေရဲ့ မူလရပိုင်ခွင့်တွေကို တာဝန်ခံထိမ်းသိမ်းကာကွယ်မဲ့ အထက်လွှတ်တော်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်က ဆိနိတ်(Senate)လိုအဖွဲ့မျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကတော့ လူဦးရေအချိုးအလိုက် တက်ခွင့်ရတတ်တဲ့၊ တစ်ကယ့်ကို လူထုအခြေခံတဲ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကိုယ်စားပြုတဲ့၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုများတတ်တဲ့ လွှတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကို အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစွန်းရောက် အယူအဆတွေနှင့် ကင်းကွာသွားအောင် အကူအညီပေးသင့်သလား။ ဒါမှမဟုတ် သာမန်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကို အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစွန်းရောက် အယူအဆတွေဆီ တွန်းပို့သင့်ပါသလား။ ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေထဲက အလယ်အလတ်ကျတဲ့(Liberal and Moderate)ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ်ထွန်းလာအောင် စနစ်တကျ အကူအညီပေးသင့်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီအလယ်အလတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို စိတ်ပျက်အားလျော့အောင် စိတ်ရှုပ်ထွေးအောင် စနစ်တကျ ပိတ်ဆို့ထားသင့်ပါသလား။
အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အယူအဆတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းက သာမန်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကို ပညာပေး စည်းရုံးလက်တွဲရမယ်၊ အလယ်အလတ် သဘောထားရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖေါ်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး အခြေခံသင်ပုန်းကြီး ကကြီး၊ ခခွေး ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အမည်ကိုတောင် မကြားချင်တတ်တဲ့ အစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်များကို တစ်ချက်လောက် ထပ်ထောက်ပြလိုပါသေးတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်က တစ်ယောက်မကျန် မောင်းထုတ်တာမျိုးကို လုပ်နိုင်မယ် ထင်ပါသလား။ မလုပ်နိုင်ဖူးဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေနိုင်ဖို့ ဦးဆောင်မှုပေးချင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းဆိုတာကို အချင်းချင်းကြားမှာရှိနေတဲ့ သံသယတွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေကို အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သာ တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့် မတည်ဆောက်နိုင်ပါဘူး။ မိမိပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ လက်မတွဲဘဲနဲ့တော့ ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းတိုးတက်ရေး၊ လုံခြုံရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ် မတိုးတက်ရင် ရခိုင်ပြည်သူတွေလည်း တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ပါ။ စစ်အစိုးရကိုလည်းတိုက်၊ ရိုဟင်ဂျာကိုလည်းတိုက်ဆိုတဲ့ ဗျူဟာသည် အင်မတန်မှားယွင်းနေကြောင်း အချိန်က သက်သေပြနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနှင့် ရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည်တစ်ဦးရဲ့ ရေဒီယိုအင်တာဗျူးကို တင်ပြလိုပါတယ်။ သူက “ဗမာပြည်မှာ ဘယ်လိုမှလဲနေလို့ မရတော့ပါဘူး။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း အစိုးရက ဒုက္ခပေးနေတာဘဲ။ ပင်လယ်ထဲမှာ တခါထဲ သေရင်လဲ သေပစေတော့ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သာမန်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့ နေ့တဓူဝဒုက္ခကို မည်သူမဆို စာနာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
This is my personal opinion piece. All logical responds are welcomed.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/06/20096အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/06/20090အကြံပြုခြင်း
သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 06 2009 11:52 - မြန်မာစံတော်ချိန်
စစ်အစိုးရက ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည်ဟုဆိုသော ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွှေ့ဆိုင်းဖွယ်ရှိနေသည်။ သို့သော် သူတို့ပေးသော အကြောင်းပြချက် များကြောင့် မဟုတ်။ အမှန်မှာ အာဏာကို ကြာရှည်ဖက်တွယ်ထားလိုသည့် စေ့ဆော်မှုကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟု စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောကြသည်။
“၁၉၉ဝ စုနှစ် နှောင်းပိုင်းတုန်းက အစိုးရဝန်ကြီးတယောက်က စစ်အစိုးရအနေနဲ့ နောက်ထပ် ၁ဝ နှစ်လောက် အာဏာယူထားဦးမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒါ အခု မှန်နေတာပဲ” ဟု မြန်မာ့အရေးကို ကြာရှည်စွာ စောင့်ကြည့်နေသူက ပြောသည်။ “ဒါ့အပြင် တပ်ကအရာရှိတွေကလည်း ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းမယ့် ကိစ္စမျိုးကို တမျိုးတဖုံ ပြောင်းပြီး ပြောလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အထက်က တခါထဲ ည¸န်ကြားထားပေးပြီးသား” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အတိုက်အခံများ၏ အဖျက်အမှောက် လုပ်ရပ်များ အပါအဝင် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းရနိုင်သည်ဟု စစ်တပ်အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးက ပြောကြားကြောင်း အကြားအမြင်များသော သတင်း ရပ်ကွက်များကို ကိုးကားကာ ထိုင်းအခြေစိုက် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနက ပြီးခဲ့သော ကြာသပတေးနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တပ်မှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တင်မောင်ရွှေက အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း မရှိပါ။ ပြည်တွင်းမှ စီးပွားရေးဆောင်းပါးရှင်တဦးကမူ အဆိုပါ အဖျက်လုပ်ငန်းများကို စစ်အစိုးရကပင် ဖန်တီးပြုလုပ်သည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်းဖြင့် စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်တွင် မကြားသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အများအပြားတွင် စစ်အစိုးရက ဗုံးဖောက်ခွဲသူ တရားခံများကို ဆက်တိုက်ပင် မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကို ရည်ည¸န်းကာ ပြောဆိုသွားသည်။ ဤသို့ ဗုံးပေါက်ကွဲသည့်အခါတိုင်း စစ်အစိုးရက ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများကိုသာ အပြစ်ဖို့ ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။
“အစိုးရက သူတို့လက်ချက်လို့ အမြဲပြောနေကျပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ သက်သေလည်း ပြနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဆောင်းပါးရှင်က ပြောသည်။ စစ်အာဏာအတွက် ဤသို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မတည်မငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပွားအောင် စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကသာ ဖန်တီးပြုလုပ်နေကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
နေပြည်တော်အခြေစိုက် အခြား အကြားအမြင်များသော သတင်းရပ်ကွက်ကမူ စစ်အစိုးရသည် ဆူပူလှုံ့ဆော်ရေးသမား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ရန်အတွက် သင်တန်းအစီအစဉ်တခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
“ဒီဆူပူလှုံ့ဆော်ရေးသမားတွေ သုံးပြီးတော့ စစ်အစိုးရက နောက်လအနည်းငယ်အတွင်း ဗမာနဲ့ ဒေသခံ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတခု မီးမွှေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်။ ဒါ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေတွေအပေါ် အာရုံစိုက်နေတာကို အာရုံပြောင်းအောင် လမ်းလွှဲနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ပဲ” ဟု ထိုသတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။
မည်သည့်နည်းကိုပင်သုံးသုံး စစ်အစိုးရအတွက် အခွင့်သာနေသမျှ ဘယ်လိုရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းပြ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်အောင် သုံးမည်သာ ဖြစ်သည်ဟု ထိုသတင်းရပ်ကွက်များက ဆိုသည်။
“အခုထိ စစ်တပ်ကြီးစိုးတဲ့ အစိုးရတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီတို့၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီတို့ဆိုတာ သူတို့သာ တကယ် တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ခဲ့မှာပေါ့” ဟု လူငယ်မြန်မာပညာရှင်တဦးက ပြောသည်။
“သူတို့က ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာကို အပြသက်သက်ပဲ ဆက်လုပ်နေကြတာ။ ဒါပေမဲ့ လူထုကတော့ ဆက်ပြီး ဒုက္ခခံနေကြရတုန်းပဲ။ ချမ်းသာတဲ့လူတွေက ပိုချမ်းသာလာတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေက ပိုဆင်းရဲလာတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
သူက ဆင်းရဲသားများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ ဆင်းရဲကြသည်မဟုတ်၊ အသိဉာဏ်ပိုင်းတွင်လည်း ချွတ်ခြုံကျသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဆင်းရဲသားများ ရနိုင်သည့် အကျိုးစီးပွားဆိုသည်မှာ လက်ကြားယိုသလောက်သာ ဖြစ်သည်။ အကူအညီနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ နောက်ဆုံးတွင် ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံမှာမူ လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတို့ကို လေးစားခြင်း မရှိသည့် လုပ်အားဦးစားပေး အဆင့်နိမ့် စက်မှုလုပ်ငန်းများသာရှိသည့် ချွေးပေါင်းရုံအဆင့်က တက်မည်မဟုတ်ဟု သူက ပြောသည်။
ဤနည်းဖြင့် စစ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာမန်လူထု အများစုကြီး၏ လိုလားတောင့်တချက်ဖြစ်သော ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ခေါင်းဆောင်မှုသို့ ပြောင်းလဲရေးကို လေသံလျော့သွားအောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤသို့ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်မလာအောင် တားဆီးတားသည့် နောက်အကြောင်းတရပ်မှာ အနာဂတ် ပါလီမန် လွှတ်တော်တွင် မည်သို့သော ကိုယ်စားလှယ်များ ထားရှိမည်ဆိုသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရတွင် မတင်မကျ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် လွှတ်တော်တွင် ထားရှိရမည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရပ်သား လက်တွဲလုပ်ဖော်များ ချို့ငဲ့နေခြင်းအတွက် စစ်အစိုးရအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နာယကအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကြီး (ကြံ့ဖွံ့) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးကလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒီမိုကရေစီကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် ရှာဖွေနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ တတိယအင်အားစုဟု ရည်ည¸န်းပြောဆိုကြသော တသီးပုဂ္ဂလများကလည်း အပြောင်းအလဲများ လုပ်နိုင်ရန်အတွက် စစ်တပ်တွင် သူတို့ကို ကူညီနိုင်မည့် အရပ်သား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ လိုသည်ဟု ခုခံပြောဆိုကြသည်။ စစ်တပ်မှ အရပ်သားအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလာမည့်သူများအတွက် သူတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိသည့် အရပ်သား လက်တွဲဖော်များ လိုသည်ဟု သူတို့က ခုခံချေပ ပြောဆိုကြသည်။ နှစ်ဘက်လုံးက အလယ်အလတ် ပျော့ပျောင်းသော သဘောထားရှိသူများကသာ ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်တွင် ကြုံနေရသော လိပ်ခဲတည်းလည်း အခြေအနေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံကို လက်ခံဖို့လည်းလိုသည်ဟု သူတို့က ပြောသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အခြေအနေမှာ စိုးရိမ်စရာကောင်းစဲ အခြေအနေတွင်သာ ရှိနေသေးပြီး ယခုအချိန်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တဦးတည်းကသာ ချနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဤအတောအတွင်း တပ်မတော်ကလည်း သမရိုးကျ နည်းလမ်းများအတိုင်းသာ ရှေ့ဆက်သွားလိုသည့် ဝါရင့်နိုင်ငံရေး သမားများကို မယုံကြည်၊ အချို့သော ဝါရင့်များသည် ၁၉၄ဝ စုနှစ်များ အနှောင်းပိုင်းက နိုင်ငံရေးလောကတွင် ရှိခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းရစေနိုင်သည့် အကြောင်းပြချက် ၄ ခုထဲမှ တခုဖြစ်သော ရေနံဓါတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် တင်းမာမှုဆိုသည်မှာလည်း အကြောင်းပြချက် တရပ်သာဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဆောင်းပါးရှင်က ပြောသည်။
“ဒါမျိုးက နိုင်ငံ၂ ခုကြားမှာ၊ နိုင်ငံတွေကြားမှာ ဖြစ်နေကျ ပြဿဿနာပဲ။ ဒါမျိုးဖြစ်လာရင် နိုင်ငံအများစုက လက်တွေ့ကျကျ ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ အချိန်ယူဖြေရှင်းတာပဲ” ဟု သူက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ဤသို့ ၂ နိုင်ငံကြား ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုဆိုသည်မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းရလောက်သည့် အကြောင်းတရပ် မဟုတ်ကြောင်းဖြင့် သူက ဆက်ပြောသည်။
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကျွမ်းတဝင်ရှိသူ နောက်တဦးကမူ မြန်မာနိုင်ငံသည် နယ်နိမိတ်နှင့် လူဝင်မှု ပြဿဿနာများ၌ အများစု သူ့ဘက်က မှန်လေ့ရှိသည်ဟု ပြောသည်။
“ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာက နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ နိုင်ငံရေးအရ မျက်နှာပန်းမလှ ဖြစ်နေတော့ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံကလည်း ဒီအခြေအနေပေါ်မှာ အခွင့်ကောင်းယူ အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ သဘောရှိတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြဿဿနာမှာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွက်လည်း မြန်မာနိုင်ငံထက် မလျှော့ဘဲ ပြဿဿနာကြီးတရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူမျိုးများကလည်း သူတို့ကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆက်ဆံခဲ့ကြကြောင်းဖြင့် သူက ပြောသည်။ ဤရိုဟင်ဂျာများကို မည်သည့်ရိုဟင်ဂျာက မည်သည့်နိုင်ငံဘက်က ဖြစ်သည်၊ ဦးရေ မည်မျှရှိသည် ဆိုသည်ကို နှစ်နိုင်ငံလုံးက ဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားကြရဦးမည်။ အချို့က ဘင်္ဂါလီလူမျိုး စီးပွားရေး ဒုက္ခသည်များသာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် စစ်အစိုးရဘက်က ပြသော အကြောင်းပြချက် ၂ ရပ်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းများ မပြီးဆုံးသေးခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရေး အစီအစဉ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿဿနာများဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စ ၂ ရပ်စလုံးအတွက် အကူအညီပေးလိုကြသော နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ ကမ်းလှမ်းမှုများကို စစ်အစိုးရက ကြိမ်ဖန်များစွာ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
နောက်အကြောင်းတရပ်မှာ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ၊ အထူးသဖြင့် ဝ နှင့် ကချင်အဖွဲ့တို့က လက်နက်ချရန် ငြင်းဆန်နေပြီး၊ နောက်ပိုင်းကျမှ ၂ဝ၁ဝ တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် အစီအစဉ်ကို သူတို့ သဘောတူညီပါကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြသည်။
ဝပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP) ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖြစ်သော ဝပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) တွင် အင်အား ၂ သောင်းခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ မြန်မာအစိုးရက သူတို့နယ်မြေကို ‘ရှမ်း ပြည်နယ်အထူးဒေသ အမှတ် (၂)’ ဟု ဆက်လက်ခေါ်ဆိုစေလိုသော်လည်း ဝတို့က သူတို့နယ်မြေကို ‘ဝပြည်နယ်အထူးဒေသအစိုးရ’ ဟု စတင်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကမူ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း၊ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတရပ် ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
ပအို့ဝ်များကမူ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ထိုအတောအတွင်း ချင်း၊ မွန်နှင့် ရှမ်းတို့ အပါအဝင် နောက်ထပ် အ"ိက တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများကိုလည်း စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း လိုက်လာအောင် စည်းရုံးဆွဲဆောင်ဖို့ လိုသေးသည်။
ရှမ်းစစ်မျက်နှာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်အစိုးရသည် ၁၉၉ဝ စုနှစ်များအတွင်းက ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသေးသည်။
“ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော် တောင်ကြီးလို နေရာမျိုးမှာ စစ်အစိုးရက ရှမ်းတွေကိုနှိမ်ပြီး ပအို့ဝ်တွေကို ဦးစားပေးတာ လုပ်တယ်” ဟု ကြာရှည်စွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သူက ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ပအို့ဝ်နှင့် ရှမ်းတို့ ပြိုင်ဘက်များ ဖြစ်နေကြပြီး၊ ကရင်နီပြည်နယ် နယ်စပ်ရှိ ပအို့ဝ်နီများမှလွဲ၍ ပအို့ဝ်များ ရှမ်းတို့နှင့် ဘယ်တုန်းကမှ အဆင်မပြေခဲ့ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ကြောင်သူတော် ကြေညာချက်အရမူ မြန်မာနိုင်ငံကို အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကို အခြေခံကာ ခေတ်မီနိုင်ငံတော်တရပ်အဖြစ် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းကို ယခုပင် စတင်လုပ်ဆောင်သင့်နေပြီ။
လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လအတွင်း စစ်အစိုးရနှင့်နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းအကြား ပြောဆိုမှုများအရ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကို ယမန်နှစ် နှစ်ကုန်လောက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းကြေညာပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်အထိ ထိုသို့ မလုပ်ဆောင်ရသေးပေ။
စစ်အစိုးရက မည်သည့် အကြောင်းပြချက်များပြပြ၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များ၊ အရပ်သားများ ကဲ့သို့သော ကာယကံရှင်အားလုံး ပါဝင်သည့် အလုပ်ဖြစ်လောက်သော ရွေးလမ်းမျိုးကိုမူ ယခုအထိ မရှာဖွေနိုင်သေးပါ။ ဤအတိုင်းသာ သွားလျှင် နောက်ထပ် ပိုမိုများပြားသော ပြဿဿနာများက တိုင်းပြည်၏ ၅၅ သန်းသော ပြည်သူများနှင့် စစ်တပ်၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များကို စောင့်ကြိုနေသည်။
ရိုဟင်ဂျာများသည် တိုင်းရင်းသားလော။ နိုင်ငံသားလော။ ...